तेमालको १ नं. वडाको निर्वाचन परिणामप्रति काँग्रेस कार्यकर्ताको विरोध – NamoBuddha Khabar
मंगलबार, जेठ ०३, २०७९ | १६:२४:३४ |
दलहरुको आ–आफ्नै आंकलन फेल
पोखरी नरायणस्थान–काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका वडा नं.१ को निर्वाचन परिणामप्रति काँग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिएको छ । षड्यन्त्र गरेर काँग्रेस उम्मेद्वारलाई हराएको आरोप लगाउँदै उनिहरु रुष्ट बनेको हो । अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएदेखि अझै पनि काँग्रेस कार्यकर्ताहरुले आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाईरहेका छन् ।
अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि काँग्रेस वडा इकाई सचिव सलाम सिं तामाङले षड्यन्त्र गरेर यस्तो नतिजा आएको आरोप लगाए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत गत वैशाख ३० गते शुक्रबार सम्पन्न मतदान कार्यपछि शनिवार दिउँसोदेखि मतगणना थालिएको थियो । तारवारले घेरिएको पोखरी नरायणस्थान माविको पुरानो भवनसहितको कम्पाउण्डभित्र दलका प्रतिनिधिहरुकै सहमतिमा मतगणना थालिएको थियो ।
गणनाको शुरुवातमा नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्वार इन्द्र अधिकारीले केहि मतले अग्रता लिएका थिए । १ हजार २ सय ४३ मत खसेकोमा ५ सय मत गनिसकेको थियो । मतगणना १ हजारको हाराहारीमा पुग्दै गर्दा काँग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार कुलदास तामाङ लगायतले मतपेटिका सिलको विषय उप्काएर सांठगांठको आरोप लगाए,काँग्रेसले आंकलन गरेअनुसारको मत गणनाको क्रममा नभेटिएपछि धाँधली भएको भन्न थप बल पुगेको थियो । जतिवेला काँग्रेस अध्यक्षका उम्मेद्वार ४८ मतले अग्रतामै थिए ।
‘पानी परेको थियो,केहि बेर मतपेटिका बोक्ने प्रहरीको गाडीभन्दा हामी पछिपछि परियो ।’–आशंका गर्दै काँग्रेस अध्यक्ष उम्मेद्वारले भनेका थिए । गठबन्धनमा काँग्रेसको तर्फबाट पािलका अध्यक्षमा उम्मेद्वार चन्द्र लामाले भने शंका नगर्न भनेका थिए । त्यसरी बाटोमा सेटिङ गर्ने अवस्था नै सम्भव नरहेको उनको स्पष्टोक्ती थियो ।
मतगणना निरन्तरताका लागि पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार लामाले भनेको कुरा वडा नं. १ का काँग्रेस उम्मेद्वारले नमानेपछि जिल्ला सभापति तिर्थ लामादेखि केन्द्रिय सदस्य गणेश लामासम्मको सुझाव मागेका थिए । काँग्रेस नेताहरुले दिएको निर्देशन समेत नमानेको भन्दै पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र लामा रिसाएका थिए । संवाद नमिलेपछि राती सवा ९ बजेबाट आइतबार विहानसम्म पनि मतगणना हुन सकेन । निर्वाचन अधिकृत तथा उनको कार्यालय दलहरुको निर्णय पर्खेको भन्दै मुकदर्शक बन्यो ।
मतदानपछि मतदान स्थलमै मुचुल्का उठाउँदै सिल गर्नेक्रममा सिल भाँचिएकोमा नयाँ गरिएको सिल नं. र भाँचिएको भनिएको सिल नं. ट्याली तथा पुनः प्रमाणीकरणको काम गरिएपनि धेरै मतले अग्रता लिनुपर्ने भन्दै काँग्रेसले अडान लिएको एमाले प्रतिनिधिले जनाए ।
काँग्रेसले भने भाँचिएको सिलको बीचको नं. नभेटिएको दावी गरेका थिए । मतपत्रको अर्धकट्टी देखाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए ।
निर्वाचन अधिकृत विमला रेग्मीले भने कुनै पनि आशंका नगर्न आग्रह गरिन् । उनले भनेकी थिइन्–‘मतदान कै दिन वा गणनापूर्व नै यसखालको विषय आएको भए छानविनका लागि एक खालको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्थ्यो,विहान सबै दलले ठिक छ गणना गरौं भनेर सहमति जनाएर अघि बढेपछि अब पछाडी फर्कन मिल्दैन ।’
बाहिर काँग्रेस कार्यकर्ता तथा उम्मेद्वारका आफन्तजनले धाँधली भएको भन्दै शनिवार राती नारावाजी गरेका थिए ।
एमाले लगायतका अन्य दलका प्रतिनिधि मतगणनालाई शुचारु गर्ने पक्षमा थिए । एमालेका तर्फबाट पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार इन्द्र तामाङले भने–‘शंका गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन,यसरी बाहिर मान्छे उतारेर नारावाजी गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,यो आवधिक निर्वाचन हो,हामी जे परिणाम आउँछ,त्यो स्वीकार्छौं,अघि बढौं ।’
दलका नेताहरु सहमत भएपनि काँग्रेस वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार तामाङले अडान छाडेनन् । तामाङ कार्यकर्ता,आफन्तलाई गाउँ पुर्याउन भनि मतगणना स्थलबाट निस्के । काँग्रेस कार्यकर्ताको आक्रोसपूर्ण गतिविधिप्रति सुरक्षा निकायले संयमता देखाएझैं गर्दै मुकदर्शक बनेको एमाले कार्यकर्ताको भनाई थियो । स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा सतर्कता बढाईएको थियो ।
निर्वाचन अधिकृतले ठोस निर्णय गर्न सकेनन्,न स्थगित भएको भनिन् न अघि बढौं भनिन् । मत पत्र पहिला गणनाको क्रममा जहाँ थियो,त्यहि अवस्थामा छोडिए । काँग्रेस नेताहरुको दवावपूर्ण सहजिकरणपछि आइतवार विहान गणना सुचारु गर्न काँग्रेस वडाअध्यक्षका उम्मेद्वार सहमत भए र गणना भयो ।
विवाद भएको वडा अध्यक्षका लागि पाएको मतमा मात्रै थियो । गणना सम्पन्न हुदा नेपाली काँग्रेसका वडा अध्यक्ष उम्मेद्वारले ५ सय ३१ र एमाले वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार इन्द्र अधिकारीले ५ सय २९ पाए ।
तर काँग्रेस उम्मेद्वारको अडानका कारण १२ घण्टा बढि मतगणना रोकिनु,राती निर्वाचन अधिकृतको कुनै निर्देशन तथा जानकारी विना मतगणना कार्य वेवारिसे अवस्थामा छोड्नु र थोरै मतान्तर देखिनु पुनः नेकपा एमालेको उम्मेद्वारको लागि शंका गर्ने पाटो बन्यो । निर्वाचन अधिकृतले परिणाम घोषणा गर्नु पूर्व नै तत्काल एमाले उम्मेद्वारले मौखिक र लिखित असहमतिका साथ पुन : मतगणनाको माग गरे ।
निर्वाचन अधिकृतले शुरुमा निवेदन लिन मानेनन् । आफूहरुको निवेदन नलिएकोमा आक्रोसित एमाले पालिका अध्यक्ष उम्मेद्वार इन्द्र तामाङले भनेका थिए–‘न कसैको निन्द्रा छ,न कसैको भातपानी छ,यसरी १२/१२ घण्टा झुलाउने ? भित्र गडबडि भएको हुनसक्छ,२ मतले हारजीत हुनै सक्दैन,वडा अध्यक्षको मात्रै पुनः गणना गर्दा २ घण्टा पनि लाग्दैन ।’
एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेद्वारहरुको भने काँग्रेसका तर्फबाट उठेका वडा सदस्यका उम्मेद्वारहरुको भन्दा धेरे मतान्तर रहेकोले बढि नै रहेकोले दुवै पार्टीले समस्याको रुपमा लिएनन् ।
अध्यक्षको मत परिणामप्रति एमालेको यस्तो माग आएपछि काँग्रेस पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र लामाले भने–‘हाम्रा वडाका उम्मेद्वारले हिजो राती त्यसरी मतगणना रोक्ने काम नगरेको भए हुन्थ्यो नि,उनिहरुले बोल्ने बाटो बन्यो,अब हामीले भन्ने ठाउँ नै रहेन ।’ यद्यपी एमालेले त्यसरी धाँधलीको शंका भने गर्न नहुने र पुन गणना नगर्दा नै हुने उनको भनाई थियो ।
राती मतपत्रहरु असरल्ल राखेर मतगणना कार्य वेवारिसे जस्तै बनाएपछि एमालेले गडवडीको शंका गरेका थिए । २ मतले मात्रै अन्तर देखिएपछि गन्ने क्रममा पनि केहि मत यतायति भएको हुन सक्ने निचोेड निकाले । बाहिर एमाले कार्यकर्ताले पनि भित्र गन्ने ठाउँमा ३ मत हराएको र त्यो एमालेको हुनसक्ने आरोप लगाईरहेका थिए ।
घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुग्दा सहजिकरणका लागि आइतबार दिउँसो काँग्रेस जिल्ला सभापति तिर्थ लामादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु समेत तेमाल पुगेका थिए । लामो वार्तापछि पुनः गणना गर्दा जस्तो परिणाम आएपनि स्वीकार्ने गरी सर्वदलीय सहमाति गरेका थिए ।
जब नतिजा उल्टियो
वडा नं १ मा काँग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेद्वारले २ मत बढि ल्याएर जितेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल रंगीन थालिसकेको थियो । थोरै मतान्तरले भएपनि जितेको भन्दै कार्यकर्ताहरु खुसीयालीमा थिए तर पुनः मतगणनाको परिणाम फरक किसिमको आयो । नेकपा एमालेका उम्मेद्वार इन्द्र अधिकारीले पहिलेभन्दा २ मत बढि ल्याए । काँग्रेसका उम्मेद्वार कुलदास तामाङले पहिलेको भन्दा १ मत कम ल्याए ।
अधिकारीको ५३१ र तामाङको ५३० मत आएपछि केहिवेर काँग्रेस प्रतिनिधिले अस्वीकार गरे तर जे जस्तो परिणम आएपनि स्वीकार्ने सहमति मान्नै पर्ने नैतिक दवाव थियो भने सबै दलका प्रतिनिधि बसेर सिसिटिभीको निगरानीमा गणना गरिएको मतपरिणाममाथि बारम्बार सहजै प्रश्न उठाउन सजिलो थिएन । आइतवार राती परिणाम उल्टिएको खवर पाएपछि काँग्रेस कार्यकर्ता,आफनत,शुभचिन्तकले धाँधली भएको आरोप लगाउँदै नाराबाजी गरे । भारी मन बोकेर पोखरी नरायणस्थान चौर छोडेर उनिहरु गाउँ फर्किनुपरेको थियो ।
बाहिरी स्थीति सहज नदेखिएपछि निर्वाच अधिकृत रेग्मीले अवेर राती मात्रै निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिन् । राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्ति एवं पार्टी हो भने लोकतन्त्रको शुन्दर पक्ष निर्वाचनबाट आएको परिणामबाट भाग्नु उपयुक्त नरहेको एमाले नेताहरुको भनाई छ । यसअघि हराएका भनिएको ३ मतपत्र मध्ये १ मत भेटिएको र त्यो मतपत्र सुर्य चिन्हको रहेको स्रोतको भनाई छ ।
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनदेखि साविक सस्र्यूंखर्कमा नेकपा एमालेले जित्दै आएको छ । साविक सस्र्यूंखर्क अहिले २ वटा वडामा बाँडिएकोमा १ नं. वडा झनै एमालेको गढ मनिन्छ । गाविस रहेको वखत २०५४ र पछि वडामा परिणत भएपछि २०७४ को स्थानीय चुनावमा पनि एमाले उम्मेद्वारले अधिक मतका साथ जितेका थिए । गत चुनावमा झण्डै ३ सय मतान्तरले जितेको एमालले यो पटक पनि १ सय ५० मतान्तरले जित्ने प्रारम्भीक अनुमान गरेको थियो ।
यो बिचमा नेपाली काँग्रेस एमालेले वडामा विकास निर्माणका काम गतिका साथ गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट भएका थिए । युवाको नेतृत्वमा बैकल्पीक शक्तिको उदय आवश्यक रहेको भन्दै विशेष गरी युवाहरु नै काँग्रेसमा लागेर सांगठनिक गतिविधि अघि बढाएका थिए । त्यसकारण काँग्रेसले पनि यो पटक एमालेको किल्ला तोड्ने दावी गरेका थिए । एमाले उम्मेद्वारभन्दा २ सय बढि मत ल्याएर जित्ने आंकलन गरेका थिए ।
यो आंकलन पूर्व काँग्रेस कार्यकर्ताहरु अभियान बोकेर टोलटोल छिरेका थिए । चुनावको अघिल्लो दिनसम्म जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको विश्वास थियो । काँग्रेस कार्यकर्ता टोल छिरेर पछि एमाले नेता कार्यकर्ता पनि त्यही बस्तीहरुमा पुगे । त्यसपछि काँग्रेसलले साविक सस्र्यूंखर्क १ मा आफ्नो मत विगे्रको विश्लेषण गरे ।
धेरै कसरतपछि मतदान पूर्वसम्ममा आफ्नो माहौल पुनः फर्किएको निचोड त निकाले तर ढुक्क बन्न सकेनन् ।
एमाले उम्मेद्वार मतदानका दिन शुरुमा ठिकै मुद्रामा थिए । जब कल्लेरीवेशी वस्तीमा माओवादी समर्थक तथा कार्यकर्ताहरुले रुख चिन्हमा मत हालेको सुईको पाए तब जित्न सकस पर्ने होकि भन्नेमा पुगे ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेद्वारका रुपमा उत्तम ध्वज तामाङ उठेका थिए । उत्तम आफैंले भनेका छन्–‘काँग्रेस लगायतका साथीभाईले उत्तमले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको,उनको चुनाव चिन्ह नै छैन भन्ने हल्ला फैलाएछन् ।’
माओवादी केन्द्रलाई जाने केहि मत रुखमा गएपछि एमाले उम्मेद्वार अधिकारीको स्वभाविक रुपमा मुद्रा अँध्यारो भएको थियो । साविक सस्र्यूंखर्क ४ बाट अधिक मत प्राप्त गर्ने काँग्रेसलाई विश्वास थियो । यतिले मात्रै जित सहज नभएपछि खानीगाउँमा रहेका नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका केहि कार्यकर्ताहरुसँग सहयोगको सहमति गराए । मओवादी कार्यकर्ताको समेत केहि मत पाएको भनेपछि काँग्रेस जित्नेमा ढुक्क देखिए ।
एमाले उम्मेद्वार अधिकारीले मतदानका दिन असक्त,वृद्धवृद्धालाई सहजिकरणको नाममा काँग्रेस प्रतिनिधिले जबरजस्ती रुखका भोट ठोकेर धाँधली गरेको आरोप लगाउँछन् । मतदानमा आउन नपाएका काँग्रेस समर्थित एक जनाको मतदाता परिचयपत्र बोकेर रुखमा छाप लगाउन गएका एक जनालाई भने एमाले प्रतिनिधिले रोकेको अधिकारीले बताए ।
शुक्रवार मतदान सकिएपछि एमालेको रिपोर्टिङ यस्तो आयोकि खास गरी भैंसे क्षेत्रबाट सोचेभन्दा राम्रो मत आएको र सस्र्यूंखर्कको मत पनि राम्रै आयो यसले गर्दा एमाले बढिमा ५० मतको अन्तरमा जित्ने विश्लेषणमा पुगे ।
माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार उत्तम ध्वज तामाङले पनि चुनावको पूर्वसन्ध्यामा तेमालको वडा नं. १ मा काँग्रेस,एमाले र माओवादी कडा तक्करमा जान सक्ने रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
आईतबार राती घोषीत मत परिणामले भने सबै दलको आंकलनलाई फेल खुवाएको छ । २ सय मतान्तरले जित्ने दावी गरेको काँग्रेस १ मतले हारे । प्रारम्भीकमा १ सय ५० र मतदान सकिएपछि पनि ५० मत बढि ल्याएर जित्ने दावी गरेको एमालेले सकसले १ मत बढि पाए । अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बढि मत ल्याउने हिम्मत गरेको माओवादी केन्द्रको उत्तमध्वज तामाङको टिमले कसरत गरेअनुसार फल पाएनन् ।
यद्यपी नतिजा सार्वजनिक भएपछि काँग्रेस र एमाले दुवैले आफ्नो केहि सांगठनिक मत विग्रिएको विश्लेषण पनि गरेका छन् । काँग्रेसले सस्र्यूंखर्कमा र एमालेले सस्र्यूंखर्कमा थोरै र आधाबाटमा अलि धेरै आफ्नो सांगठनिक मत नै विग्रेको प्रारम्भिक विश्लेषण गरेको स्रोतले बताएको छ ।
यति हुदा हुदै पनि नेकपा एमालेको किल्ला भनिएको वडा नं. १ मा काँग्रेसले यति जनमत बटुल्नु भनेको उसको जीत हो । त्यसकारण लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने काँग्रेसले रोईकराई गर्नुपर्ने छैन । सस्र्युंखर्कमा काँग्रेसको बाटो फराकिलो भएको छ । आफ्नो साख गुमाउँदै १ मत बढि ल्याएर जित्दैमा एमालेले धेरै खुसी मान्नुपर्ने ठाउँ देखिदैन ।
यदि निश्पक्ष,स्वतन्त्रपूर्ण अनि धाँधलीरहित ढंगले मतदान भएको मान्ने हो भने तेमाल १ नं. वडामा एमाले,काँग्रेस र माओवादीको साईज जनताले नापेका छन्,बहकिएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वारको पनि हैसियत छर्लंग भएको छ,त्यो कुरा जनताले ढ्वाङमा खसालेको मतबाट बुझ्न सकिन्छ ।
सबैको मुद्धा एउटै
हामी सबैको साझा मुद्धा भनेको १ नं. वडाको विकास नै हो । यहाँ भएको विकास निर्माणको रक्षा,सदुपयोग र आवश्यकताको पहिचान गरी थप काम गर्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । आधारभुत विकासका पूर्वाधारहरुमा सडक,खानेपानी,स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक योजना अघि सार्न सकिन्छ ।
युवा रोजगारका विषय चुनौतीकै रुपमा छ । संस्कृति प्रवद्र्धन र असल संस्कृतिको अभ्यास पनि खड्कीएको विषय हो । जसले नैतिकता र सभ्यताको परिचय दिन्छ,जीवन सुसंस्कृत बनाउन मद्धत गर्छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सबै दलका उम्मेद्वारहरुले यस्तै खालका प्रतिवद्धता जनतामाझ गरेकै थिए ।
यो वा ऊ भनेर विभेद गर्ने,विश्वासको दुरी घटाउँदै जनतालाई आश मात्रै देखाउने छुट एमाले,काँग्रेस,माओवादी कसैलाई पनि जनताले दिने छैनन्,त्यसैले सामाजिक सद्भाव,सहकार्यमार्फत मात्रै सस्र्यूंखर्कको विकास सम्भव रहेको स्थानीय बुद्धिजीवि बताउँछन् । उनिहरुका अनुसार यो खालको सन्देश सस्र्यूंखर्कमा क्रियाशिल सबै दलका नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक,नैतिक पाटोबाट दिन आवश्यक छ ।